Izingqinamba Zelayisense yeCannabis - Kungani Izizwe Zithengiswa Ngamalayisense WaseCannabis -
Ungawathola Kanjani Ilayisense leCanbis
Ufuna ikholi esheshayo ephathelene nohlelo lwakho lokusebenza
Buyekeza isicelo sakho noMmeli we-Cannabis
Sizobuyekeza futhi sigxeke isicelo sakho selayisense le-cannabis ngeso elibheke ekushayweni kanye nanoma yiziphi izingozi zokufaka icala ezingabakhona.
Faka ikhadi elisha
Khokha	$$ 5500
Kungani Amaqembu Efuna Ilayisense Ye-Cannabis
Izingqinamba Zelayisense yeCannabis kwenzeke ngemuva kwamarounds wokufaka isicelo sokuncintisana. Amazwe noma omasipala babhekene nobungozi bamacala enkantolo kumarounds wokufaka isicelo selayisense yokuncintisana lapho inani lezicelo zebhizinisi le-cannabis lidlula kakhulu amalayisense atholakalayo. Ngaphezu kwalokho, izicelo zelayisense ye-cannabis zivame ukuqoqwa ngabantu besithathu, njengefemu enkulu yokubalwa kwezimali, engenza amaphutha ekuhlanganiseni amaphuzu. Ungalindela ukuthi amaqembu amaningi azomangalela ilayisense ye-cannabis uma bekholelwa ukuthi bekufanele banqobe. Nayi i-athikili emfushane mayelana nenqubo.
Amaphoyinti asemqoka wama-Lawsuits ngaphezulu kwelayisense ye-Cannabis
Landela imithetho yakho yezwe noma yasendaweni
thola ukuthi yini okungahambanga kahle ohlelweni
ahambisane nenqubo yesinqumo sokuphatha ekhangayo
Yazi ukubekwa kwamacala akulindelekile futhi ungalahlekelwa
Yiba nesikhalazo esibhalwe phansi nezisusa ngendlela ekholisayo
Funda konke mayelana nokuthi ungayinqoba kanjani ilayisense ngokuzayo
ISIQONDISO ESIQALILE: Isicelo selayisense ye-Illinois Dispensary
ISIQONDISO ESIQALILE: I-Cannabis Nezifundo Zocwaningo
ISIQONDISO ESIQALILE: Ukusebenza Okucacile
Ufuna ummeli we-canannabis abukeze uhlelo lwakho?
Thola Ukubuyekezwa Kwesicelo
UKUGULA ISITOLO SAKHO SESIQINISO SECanada LOKWENZA
Sonke sicabanga ukuthi, ngemuva kokusebenza kanzima, kanzima kakhulu ukuthi sikufanele ukuwina ilayisensi ye-cannabis - kepha emazweni ancintisanayo - iningi labantu alinqobi. Futhi kulapho amacala aqala ukundiza… sizokhuluma ngakho ngakho esiqeshini sanamuhla se-.
Irejista Yemali - IZINDABA ZOKUFUNDA AMAKHANSI
Ngiyabonga ngokujoyina nathi, nginguTom - futhi ungangithola ngokuya kuwebhusayithi yami - umkhakha we-cannabis ummeli.com - lapho ngibeka khona okuqukethwe okunje ukuze uthole konke ofuna ukukwazi ngomkhakha wezomthetho we-cannabis.
IZIMALI ZOKWENZA IZAKHONO ZAKHANZA ZIBANGELA ISITOLO SEZIMALI NEZIMALI
Nakhu okungenzeka usuvele uyakwazi - hhayi zonke izifundazwe ezivumela noma ngubani ofuna ilayisense ye-cannabis ukuthi ayithole - Amazwe afana ne-Illinois, noma iMissouri, eMaryland - amukele uhlelo lwelayisense lokuncintisana lapho izicelo zithola khona labo okuthiwa ochwepheshe ukuze babe “abahamba phambili. ” Bukela kuze kube sekupheleni futhi ngizokutshela indlela engaqeda wonke amacala, okungangisizi ngalutho njengombangi wensangu. Kepha lokho akunandaba ne-Illinois, noma mhlawumbe izwe lakho.
IZIMFUNO EZENGEZIWE ZESIQINISO SEZIMALI ZESIQINU ZECANSI ZITHOLAKALA KAKHULU
Noma iqembu lakho liqine futhi lithole ilayisense. I-Illinois yabelwe kuphela amashumi amane umlimi wezandla nobuciko bamalayisense angama-40. Futhi, i-Illinois kuphela izokhipha amalayisense wokusebenzisa abantu abadala angama-75, kepha ithole izicelo ezivela ngaphezulu 700 amaqembu afake izicelo ezingaphezu kuka-4,000. Ngakho-ke izingqinamba zinde - noMbuso muva nje ukhishwa I-KPMG, enye yamafemu amakhulu ama-accounting amane, inkontileka yokuthola umjikelezo wakamuva wohlelo lokusebenza lwe-dispensary. Inkontileka ihlinzekela iphrojekthi yokubonisana yokuhlelwa okungaqondakali yamadola ayizigidi ezimbili (ama- $ 2,000,000).
IMISEBENZI EMISELWEYO YOKUFAKA ISICWANGCISO SAMAHHALA
Enye incwadi ethokozisayo esivumelwaneni sikaHulumeni ne-KPMG ukuthi ilinganisela amanye ama- $ 500,000 “ekubonisaneni nabezomthetho,” ngenani elikhulu lama- $ 200 / ihora. Ngokwemibandela evamile, uMbuso ubukeka ukulungele ukunikela ngamahora angamakhulu omsebenzi wokubuyekeza ukuze "usebenze" noma "uphiko" lwabameli. Uma ungazi - bese ubaphula ukuthandwa futhi ubhalisele ukufunda kabanzi ngemithetho ye-cannabis - kepha umsebenzi wommeli wesivumelwano empeleni uhilela ukugcwala inqwaba yabameli abangenalwazi egumbini, lapho bekhokhwa imali encane kakhulu ukuthi bangayeki emsebenzini oyisidina , okuholela kumkhiqizo abantu abambalwa abawuthandayo - ngisho nabantu abawenzayo. Lowo yilowo obonakala ekhetha ukuthi yiliphi iqembu eliwina ilayisense. Okudonsa isikhathi esikhulu lapho ubheka izibalo zendaba.
Izibalo ezilula zisho ukuthi abafakizicelo abaningi bazolahlekelwa. Izicelo ezingama-4,000 zamalayisense okukhishwa angama-75 kuphela zilingana nethuba lokwehluleka elingu-98.125% - njengoba kusho isisho, ithemba lihlala njalo ekugijimeni okuluhlaza komkhakha wensangu. Ukube izingqinamba bezingezinde ngokwanele, inqubo yokufaka amagoli ebekwe wumbuso yenza ukuthi kube lula ukuthi abanye abafake izicelo balahlekelwe ngenxa yephutha lomuntu. Ngesizathu esihle, iqembu lakho lingafuna ukumangalela uMbuso noma umasipala ukuze bathole ilayisense lebhizinisi le-cannabis abakholelwa ukuthi balitholile.
Ufuna Ukudlulisa Isinqumo Sakho
Bheka Umthetho Wombuso Wakho Ukuthi Ungasikhalaza Kanjani Isinqumo Selayisensi Yensangu
I-Illinois, i- ICannabis Regulation kanye noMthetho Wentela ivumela abafakizicelo ukuthi bamangalele ngaphansi koMthetho Kahulumeni Wokubuyekezwa Kwezokuphatha othi “[izinqumo zokugcina zokuphatha zoMnyango ezingezansi zizoba ngaphansi kokubuyekezwa kwezomthetho ngaphansi kwezinhlinzeko zoMthetho Wokubuyekeza Kwezokuphatha [.]” UMthetho uhlinzekela ukuthi izinqubo zokubuyekezwa kwezobulungiswa kwenzeka esifundeni lapho kuhlala khona iqembu elifaka isicelo sokubuyekezwa (ofake isicelo), noma iSangamon County yephathi engaphandle kwezwe. Uma ukhuluma ngababukeli bakahulumeni, hlola iziphathimandla ezifanele zombuso wakho, ukuthola amalungelo awo athile. Udinga ukuhambisana nalezo zidingo ukuze uphishekele amalungelo akho.
Izinqubo Zokubuyekezwa Kokulawula kumele zilandelwe
Umthetho we-Illinois Administrative Review unezinto ezimbalwa eziphawulekile zokwenza lokho. Kudinga ukuthi iqembu elifuna ukubuyekezwa kufanele lifake isikhalazo bese likhipha amasamanisi ngaphakathi amashumi amathathu nanhlanu (35) izinsuku zesinqumo sokuphatha okukhulunywa ngaso. Isikhalazo singadinga ukuthi uMnyango wezoLimo noma i-IDFPR inikeze umlando ogcwele wenqubo yokubuyekezwa ngaphansi kwesigaba 3-108 (a). Kodwa-ke, "[n] o ubufakazi obusha noma obungezekile bokuxhasa noma obuphikisana nokutholakele, ukuhleleka, isinqumo noma isinqumo senhlangano yezokuphatha kuzolalelwa yinkantolo." Leso sigaba sinikezela ukuthi "[t] yena uthola kanye neziphetho zenhlangano yezokuphatha ngemibuzo yeqiniso izobanjwa prima facie iqiniso futhi lilungile. ”
Khumbula zonke lezo zikhathi ngithe udinga isicelo esiphelele kakhulu nesiphelele - kungenzeka lokho kungenxa yokuthi inqubo yesikhalazo sombuso wakho ithatha leso sicelo njengerekhodi lakho lesikhalazo futhi awukwazi ukwengeza noma yini entsha kuso ukuhambisa umbono wabo.
Ngaphezu kwalokho kungakhohlisa lapha - okuyisigaba senkantolo yamacala aphikisanayo aphikisanayo - izicelo ze-cannabis zivame ukuba nezindlela zokukhonkolo, ngohlelo lwamaphuzu olubonakala luphelele. Kodwa-ke, abafakizicelo bathola amaphuzu ngokususelwa ekulandeleni kwabo umthetho kuphela, kepha futhi nangamandla abo namandla abo njengamabhizinisi. Isibonelo, uma uMbuso unquma ukuthi ama-proformas kanye nenani lemali yomfakisicelo muhle, kodwa cha omkhulu, lokho kungukunqunywa komthetho noma iqiniso? Lezi zinhlelo zokusebenza zibukeka zifana nemibuzo yakudala exutshwe nomthetho neqiniso - nokuyinto ezodida abantu abangahambisani namacala, okuyinto iningi labafakizicelo elingenjalo.
Ngaphezu kwalokho, amaphuzu ashiwo ngenhloso empeleni asuselwa ezinqumweni zabantu abazithobayo. Okunye okwenza inkinga ibe yinkinga isikhathi esinqunyiwe sokukhipha amaphuzu akhelwe kumthetho, ongaguqulwa kuphela yi-executive order. Lokhu sekuvele kwenzekile e-Illinois, ngenkathi ngoMashi 12, 2020, uMbusi uJB Pritzker ekhipha i-oda ephezulu ehlobene ne-coronavirus enweba umnqamulajuqu wokulethwa kwezicelo ngamasonto amabili. Ukubambezeleka okungeziwe kungenzeka kuvele e-Illinois. Kwake kwenzeka ngaphambili kwezinye izifundazwe - ngaphandle kobhadane lomhlaba wonke ukubhekana nalo.
Ukubuyekezwa kokuthi Uyifinyelela Kanjani ilayisense le-Cannabis emazweni ahlukene
Ngemuva kokubukeza ezinye izifundazwe njengesiqondisi sethu, sinombono omuhle wokuthi kuyini okuzayo njengokugibela izimangalo ze-cannabis. Isimo saseFlorida sithathe umkhuba wokumane sixazululwe ngezimbangi zokushintshana ukuze sinikezwe u ilayisensi. IFlorida ihamba nempi ehlukile yezomthetho ngoba izwe lidinga ukuthi izinkampani ze-cannabis zibheke phezulu edidiyele, enomthelela wokwakha izithiyo ezinkulu ekungeneni. IMissouri nayo ibhekene nokuhlukumezeka okukhulu ngemuva komjikelezo wayo wokugcina wokufaka izicelo. Kunenqwaba yamacala - kumakhulu - kusalindwe ngemuva kokuthi iningi lamakhulu kanye nabafaki bezicelo behlulekile ukuthola ukuthola umbuso Amalayisense wokutshala angama-60. Okukhathaza kakhulu eMissouri ukuthi abaphumeleleyo babebonakala bevame ukuba kwezepolitiki kuxhunyiwe ngabanye. Ekulungiseleleni amaqembu ethu abafaka izicelo, sizibonele mathupha ukuthi umehluko ongakanani ohulumeni basekhaya abangawenza ekusekeleni noma ekuphikiseni umfakisicelo. Kungenzeka ukuthi uke wangizwa ngasho phambilini, futhi uma ubhalisa uzongizwa ngithi futhi - yonke insangu ingeyasendaweni.
I-Canannis License Litigation kanye ne-Lottery Systems
Asikwazi ukusho ngokuqinisekile ukuthi amacala e-cannabis azohamba kanjani e-Illinois. Kepha uma iFlorida neMissouri kuyizinkomba, sekuzoba ibhizinisi elikhulu elizohlala lapha. Siyabonga ngokubuka kuze kube sekupheleni - Manje ake sicabange indlela ezinye izifundazwe ezingakwazi ngayo ukugwema isikweletu sokufaka ngokungafanele abafaka izicelo zamaphuzu aphezulu. Ukugwema lokhu kubangwa kungaba yinto umbuso ofuna ukuthi umthetho wayo uyifeze.
Amazwe afana ne-Arizona, isibonelo, ahlongoze imithetho ye-cannabis efuna ukuthi izidingo ezithile zihlangatshezwe ngumfakisicelo osebenza njengomkhawulo wokufanelekela ukudlala ilotho yelayisense. I-Illinois 'ifuna ilotho uma kukhona uthayi phakathi kwabafakizicelo abathola amaphuzu aphezulu. I-lottery engahleliwe impela ilukhuni ukuphikisa ukuthi woniwe, ngaphandle kwalapho kukhonjisiwe. Kepha ngokuqinisekile akukho okungakhishwa embonini ye-cannabis, noma kunoma iyiphi imboni - akunjalo?